संसद् अधिवेशनमा कसरी अघि बढ्ने ? तीव्र संवादमा विपक्षी दल « Drishti News – Nepalese News Portal
संसद् अधिवेशनमा कसरी अघि बढ्ने ? तीव्र संवादमा विपक्षी दल
२५ बैशाख २०७८, शनिबार 6:26 am
कांग्रेसले ‘अविश्वासको मत’का लागि माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमाले माधव नेपालसमूहसँग आन्तरिक छलफल जारी राखेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतका अनुसार ‘अब कसरी अघि बढ्ने ?’ भन्ने विषयमा विपक्षी दलबीचमा संवाद जारी छ । विपक्षमा रहेका अन्य दललाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘मत नदिन आग्रह गरिने’ उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको बुधबार कांग्रेससँग ‘विश्वासको मत’ माग्दै सहकार्य प्रस्ताव गरेका थिए । उनले एमाले नेतासहित कांग्रेस सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर विश्वासको मत मागेका हुन् ।, यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।